RASMI: Saddexda xiddig ee ku tartami doona abaal-marinta laacibka bishii November ugu fiinaa horyaalka La Liga oo la shaaciyey – Gool FM
RASMI: Saddexda xiddig ee ku tartami doona abaal-marinta laacibka bishii November ugu fiinaa horyaalka La Liga oo la shaaciyey
(Madrid) 03 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey dhowaan saddexda laacib ee ku tartami doona abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa horyaalka La Ligaha Spain bishii la soo dhaafay ee November, waxaa ka soo muuqday saddex ciyaaryahan oo ka kala tirsan saddex kooxood oo kala duwan.
Benzema, Messi & Morata ayaa ah saddexda ciyaaryahan ee u sharraxan abaal-marinta laacibka bisha November ee horyaalka La Liga.
Maamulka horyaalka La Liga oo eegaya bandhiggii ay saddexaan laacib sameeyeen bishii hore ayaa ku dhawaaqay in abaal-marinta xiddiga bisha November ee horyaalka La Liga ay ku tartami doonaan Benzema, Messi iyo Morata.
>- Benzema ayaa dhaliyey 7 gool waxaana uu dhiibay ama caawiye ka ahaa 2 gool oo kale 6 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa Real Madrid bishii la soo dhaafay ee November.
>- Lionel Messi ayaa dhaliyey 5 gool waxaana uu dhigay ama caawiyey 3 gool oo kale 5 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa Barcelona bishii hore.
>- Morata ayaa isaguna dhaliyey 3 gool isla markaana caawiye ka ahaa 1 oo gool kale 5 kulan oo uu u dheelay kooxdiisa Atletico Madrid bishii la soo dhaafay ee November.
Yaa saddexdaan xiddig u qalma inuu ku guuleysto abaal-marintan aragtidaada noogu reeb qeybta hoose ee faallada?
"Sadio Mané waa Afrikaan waana sababta uu kaalinta afaraad uga galay tartanka Ballon d’Or"
Mourinho oo ka hadlay xiriirka kala dhexeeya taageerayaasha Man United, kahor booqashadiisa garoonka Old Trafford